Fiahiahiana halatra taolam-paty… tany Betafo: nodoran’ny olona ny trano sy ny tsenan’ilay mpandraharaha | NewsMada
”Resaka halatra taolam-paty…”, hoy ny feo mandeha sy ny filazan’ny olona. ”Fausse alerte”, hoy kosa ny zandary. Mifamahofaho be ihany ny zava-nitranga tao Betafo, hatry ny afakomaly alina sy omaly maraina. Ny zava-nisy, nentin-katezerana ny olona ka nandoro sy nandroba ny trano fonenana sy ny fivarotan’ny mpandraharaha mpanefoefo iray ao an-tanàna. Fitsaram-bahoaka…
Ny fifarimbonan’ny zandary sy polisy avy any Antsirabe, niampy ny ao Betafo, sy fanapoahana grenady lakrimozena vao nahaparitaka ny olona anjatony nanao fitsaram-bahoaka tamin’ny lehilahy iray mpandraharaha ao amin’ny kaominina Betafo, Antsirabe II, afakomaly hariva. Tapitra norobain’ireo andian’olona ireo ny entana rehetra tao an-trano ary samy nibata izay zakany ny rehetra. Tsy vitan’izay fa mbola nodoran’ireo mpandroba koa ny trano ka kila hotohoton’ny afo. Hatramin’ny omaly maraina aza, mbola nihaodihaody teny akaikin’ny toeram-pivarotan’ilay mpandraharaha niharan’ny fandrobana ireo andian’olona nikasa mbola hanohy ny fandrobana, saingy niditra an-tsehatra nanaparitaka ireo mpandroba tamin’ny alalan’ny grenady lakrimozena ny zandary.
Misafotofoto be ihany ity raharaha izay niafara tamin’ny fandrobana ny tranon’ilay mpandraharaha ity. Araka ny loharanom-baovao voaray avy any an-toerana, manan-draharaha eny amin’ny fitsarana ity mpandraharaha ity ka efa nandrasan’ny olona kendry tohina satria araka ny feo miely sy ny resaka miparitaka ao an-tanàna, voarohirohy amina resaka hala-jaza sy taolam-paty izy. Nanana olana tamin’ny mpiasany teo aloha koa izy ka notazoniny an-keriny tao an-trano io mpanampiny io, saingy tafaporitsaka ka niantso vonjy amin’ireo olona eo an-tanàna. Nitangorona vetivety ny olona taorian’izay ary niparitaka ny feo fa novonoin’ilay mpandraharaha io mpiasany io ary nentiny nitsoaka tamin’ny fiara 4×4, araka ny fieritreretan’ireo olona, raha ny fampitam-baovao voaray hatrany. Nentin-katezerana ireo andian’olona marobe ka nandroba sy nandoro ny tranon’ilay mpandraharaha voalaza fa mpanefoefo ity. Niitatra tany amin’ny magazay miisa efatra sy garazy iray ao an-tampon-tanànan’i Betafo an’ilay mpandraharaha ny fandrobana nataon’ireo olona ka lasan’izy ireo avokoa ny entana rehetra tao am-pivarotana.
Tsy hita ilay lehilahy niantso vonjy…
Nitondra fanazavana momba ity raharaha ity kosa ny eo anivon’ny zandarimariam-pirenena, tranona mpandraharaha iray no nidiran’olona iray (mpiasa teo aloha an’ilay mpandraharaha, saingy efa nisy disadisa teo amin’izy ireo) tamin’io afakomaly io. Tsy tao an-trano anefa ilay raim-pianakaviana tamin’ny fotoana nahatongavan’ilay mpiasany teo aloha tao an-tranon’izy ireo. Voalaza fa nanao sotasota tamin’ireo olona tao an-trano ilay mpiasa ka niafara tamin’ny fahafatesan’ny zazakely iray telo taona, zafikelin’ilay mpandraharaha. Naratra ny olona telo nandritra ny fifanjevoana ka isan’izany ny vadin’ilay mpandraharaha, mbola tsaboina ao amin’ny hopitalin’Andranomadio Antsirabe. Nanohitra ity lehilahy nahavanon-doza ity rahateo izy ireo. Tonga koa ilay mpandraharaha ka tsy nahatohitra intsony ilay mpiasa ka nitsoaka avy hatrany. Nampilaza tamin’ireo mponina eo an-tanàna izy fa hoe niharan’ny herisetran’ilay raim-pianakaviana ka nirohotra avy hatrany ireo andian’olona marobe nitsofoka tao an-tranon’izy ireo. Nohamafisin’ny zandary fa misy raharaham-pitsarana momba ity raim-pianakaviana ity any amin’ny fitsarana ka nahatonga ireo andian’olona nanararaotra nandroba sy nandoro ny tranony. Nilaza hatrany ny zandary fa “fausse alerte” no henon’ireo andian’olona izay tsy nahalala na inona na inona ka niafara tamin’izao fitsaram-bahoaka izao. Mandeha, araka izany, ny fanadihadian’ny zandary momba ity raharaha ity. Tsy mbola hita kosa ity mpiasa niantso vonjy tamin’ireo andian’olona marobe ireo. Ny fanadihadian’ny zandary no ahafantarana ny marina rehetra momba ity raharaha ity na nisy tokoa na tsia ity resaka hala-jaza sy halatra taolam-paty ka nanaovan’ny olona fitsaram-bahoaka tamin’ity mpandraharaha ity.